ZAZA TERAKA KRISMASY :: Efa nampoizin’ny rainy ny andro nahaterahan’i Mathis • AoRaha
ZAZA TERAKA KRISMASY Efa nampoizin’ny rainy ny andro nahaterahan’i Mathis
Hafaliana roa sosona ny an’ ireo ray aman-dreny nahazo fara sy dimby tamin’ny andron’ny Noely. Ho an’i Manamiravo Mbolanandrianina, dia efa napoiziny ny andro nahaterahan-dRamanamiravo Ajinûrah Mathis Evan’s, zazalahikely teraka, ny talata 25 desambra 2018 tamin’ny 9 ora sy 10 minitra maraina tao amin’ ny hopitaly fiterahana etsy Befelatanana.
“Efa niteny tamin’ny vadiko aho fa krismasy mihitsy izy no teraka. Tsy nisy nanaiky izany ireo fianakaviana sy ny manodidina fa dia izay foana no naveriko hoe miara-teraka amin’i Jesosy ny zanakay. Tsy kisendrasendra izany fa fanomezam-pahasoavana manokana mihitsy. Sady fanomezana krismasy sy taona vaovao ho ahy i Mathis kely”, hoy Mbolanandrianina, rainy, niresaka am-pifaliana.
Marihina fa zaza voalohany ho an’ity fianakaviana kely ity i Mathis. Salama tsara izy sy ny reniny ary nilanja 3 kilao izy teo am-piterahana.Zaza miisa 11Tamin’ity taona ity dia zaza iraika ambin’ny folo no teraka tao amin’ity hopitaly ity teo anelanelan’ ny tamin’ny 10 ora sy 54 minitra alina ka hatramin’ ny 9 ora maraina. Tsy nisy kosa ny teraka tamin’ny sasak’alina katroka. Nisy tamin’ireo zaza ireo no kambana mianadahy.
“Zaza enina no teraka, ny alin’ny 24 desambra. Efa maraina kosa ny sasany vao teraka. Teraka tsotra tsy nisy fandidiana avokoa ireo zaza ireo”, araka ny fanamarihan’ny mpampiteraka mpiandry raharaha teo anivon’ny hopitaly. Zaza lahy ny ankamaroan’ny zaza teraka tao amin’ny hopitaly fiterahana Befelatanana tamin’ity fetin’ny Noely taona 2018 ity satria lahy avokoa ny valo tamin’izy ireo. Anisan’ izany i Fenoasimbola Josoa Sombiniaina, teraka tamin’ny 8 ora sy 10 minitra maraina izay milanja 3 kilao sy 700g ary salama tsara. Ny renin’i Sombiniaina no zandriny indrindra niteraka tamin’io andron’ny krismasy io satria vao 15 taona monja izy. Naneho ny hafaliany tamin’ny nahazoana ny zafikeliny Rasoanandrasana Marie Jeanne. Raha ny fitantaran’ ireo ray aman-dreny roa ireo dia tamin’ny hafaliana no niatrehan’izy ireo ny ady nandritra ny ora niandrasana ireo sombin’ny ain’izy ireo satria tsy mitovy amin’ny andro rehetra izany ary samy dodona tokoa hahafantatra ny ora sy minitra aha-tongavan’ny vahiny kely.
TENISY – TOMPONDAKAN’NY ATSIMON’I AFRIKA :: Handefa solontena mafonja atsy Namibia i Madagasikara
BAOLINA KITRA :: Hiova endrika ny raiki-pohin’ny fifaninanana « Champions League »